Qeerroon Harargee lixaa Mi’eessoo dhimma QBO irratti marii godhatan.Ilmaan Oromoo maraafis waamicha dabarfatan. « QEERROO
Qeerroon Harargee lixaa Mi’eessoo dhimma QBO irratti marii godhatan.Ilmaan Oromoo maraafis waamicha dabarfatan.
September 15, 2012 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Godina Harargee lixaa keessatti qeerroon naannoo Mieessoo walitti dhufuun dhimma qabsoo Oromoo irratti marii gaggeessan.Qeerroon naannoo kanaa walii isaanii mariyachuu irra darbanii barnoota uummata naanoof kennaa kan turan ta’uun beekame. Kana malees karaa biraa hojiilee qabsoo farra gabrummaa fi olaantummaa balleessuuf gochaa jiran gamaggamanii hojiin QBO adda durummaan dargaggoota irraa eegama kan jedhu irratti walii galanii FDG jabeessuuf murteeffatanii jiran.
Ibsa ejjennoo isaanii keessatti hamma bilisummaan ilmaan oromoo mirkanaauu fi Oromiyaa irratti Oromoon abbaa murtii tahutti qabsoo hadhaa akka fufan ibsanii jiran.Mootummaan Wayyaanee uummata Oromoo fi Affaarii yeroo ammaa kana walitti buusuuf shira inni xaxu adda durummaan hojii keenyaan fashalsuu fi ollummaa gaariin waliin jireenya ummatootaa gaarii fi nagaa irratti hojjechuuf jabaannee hojjenna jedhanii jiru.
Wayyaaneen dargaggoota Oromoo naannoo kanaa yeroodhaa yerootti mana hidhaatti guuruun messhaa waraanaa naannessitu,ABO waliin hidhata qabdu,miseensa ABO ijaaraa jirtu jechuun doorsisaa jiraachuu Qeerroon naannoo kanaas ifa godhanii jiran.Bara mootummaan Wayyaanee tasgabbii dhabee fi ilmaan Oromoo irraa waaanjoon darbamuu geessetti uummatni Oromoo tokkummaan akka mirga isaa falmatu waamicha dabarsanii jiran.
« Seife Nebelbal Radio Program, Interview with OLF Chairman, Daud Ibsa
Godina Wallagga bahaa keessatti Dabballoonni Wayyaanee uummata Oromoo fi Uummata Beenishaangul Gumuz marraa biraaf walitti buusuu itti fufan »
Guyyaa Har'aa Naannowaan Mooraa Yuuniversitii Finfinnee Humna Waraana Wayyaaneen Marfamee Jira